शिवलिङ्ग भनेको भगवान शंकरको प्रतिक,शिवलिङ्गको पूजा, बिल्कुलै बेवास्ता नगरि ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् ,तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुनेछ ! – Naya Kura Daily
शिवलिङ्ग भनेको भगवान शंकरको प्रतिक,शिवलिङ्गको पूजा, बिल्कुलै बेवास्ता नगरि ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् ,तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुनेछ !
October 15, 2020 266
हिन्दु धर्मवालम्बीहरुका लागि शिवलि,ङ्गको विशेष महत्व छ । शिवलि,ङ्ग भनेको भगवान शंकरको प्रतिक मानिन्छ । धर्मसास्त्रका अनुसार लिं,ग भनेको शक्ति हो । त्यसलैले उत्पादक शक्तिको चिन्हको रुपमा लिं,गको पूजा गर्ने गरिन्छ । लिं,गको पूजा गर्नाले सबैको पूजा हुन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । शिवलि,ङ्ग मा यो,निलाई मात्री शक्तिको प्रतीक मानिन्छ । शिवलि,ङ्ग ले पूरा ब्रह्माण्ड पुरुष र महिलाको ऊर्जाले बनेको हो भन्ने इंगित गर्दछ ।
शिवलि,ङ्ग मान्यताको अनुसार, लिं,ग एउटा बिशाल लौकिक अन्डाशय हो जसको अर्थ पूरै ब्रह्माण्डको प्रतीक हो । शिवलिं,ग र त्रिमूर्ति– त्रिमूर्तिको मतलब हो ब्रह्मा, विष्णु र महेश यसलाई अझ राम्रोसँग जान्ने हो भने यी तीनले सत्य, ज्ञान र अनन्तलाई दर्शाउँछन् । शिवलि,ङ्ग का बारेमा दुई एक पटक ब्रह्माजी र विष्णुजीबीच विवाद उत्पन्न भयो । ब्रह्माजीले सृष्टिकर्ता भएको कारणले श्रेष्ठ भएको दावी गरे र विष्णुले सृष्टिको पालनकर्ता भएको कारणले आफू श्रेष्ठ भएको दावी गरे ।
त्यसपछि त्यहाँ एक विशाल लिं,ग उपस्थिति भयो र दुवै देवतामा सहमतिले यो निश्चय गरियो कि जसले यो लि,ङ्गको समाप्ती बारे पहिला पत्ता लगाउछ त्यो नै श्रेष्ठ हुनेछ । दुवै जना विपरित दिशामा शिवलि,ङ्ग को समाप्ति खोज्न निक्लिए । तर उनीहरुलाई कुनै समाप्ति मिलेन यसले उनीहरुमा यो ज्ञात हुन्छ कि शिवलिं,ग नै अनन्तकाल हुन् । शिवलि,ङ्ग को उत्पत्ति यसको कुनै रंग हुँदैन । यो जुन रंगको सम्पर्कमा आउँछ त्यही रंगको हुन्छ । शिवलिं,गको पूजा ध्यान साधनाको लागि हो र यसलाई निर्गुण ब्रह्मा पनि भनिन्छ ।
शिवलि,ङ्ग पुजा गर्नुका केही कारण यस्ता छन:- शिवलि,ङ्ग मान्यताको अनुसार, लिंग एउटा बिशाल लौकिक अन्डाशय हो जसको अर्थ पूरै ब्रह्माण्डको प्रतीक हो । शिवलिं’ग र त्रिमूर्ति– त्रिमूर्तिको मतलब हो ब्रह्मा, विष्णु र महेश यसलाई अझ राम्रोसँग जान्ने हो भने यी तीनले सत्य, ज्ञान र अनन्तलाई दर्शाउँछन् ।
शिव मन्त्र । यो मन्त्रको जाप आफ्नो ईश्छा अनुसार ११ , २१ ,१०१ ,१००१ पल्ट गर्न सकिन्छ। यो मन्त्र मा ऊं नमः शिवाय को साथमा ऊं नमः शिवाय शुभं शुभं कुरू कुरू शिवाय नमः ऊं’ मन्त्र को जापले ठुलो ठुलो समस्या र विघ्न दुर गर्न सहायक हुन्छ। यो सँगै नमो नीलकण्ठाय, ऊं पार्वतीपतये नमः, ऊं पशुपतये नमस् मन्त्रको जाप गर्दा जिवनमा सम्रिधि र उन्नति हुन्छ।
शिव जि को प्रिय शब्द । शिव जी लाई औघड़ दानी या भोले भंडारी पनि भनिन्छ। भक्तहरुले शिव जि लाइ जुनै तरिकाले पुजा गरे पनि शिव जि प्रसन्न हुनुहुन्छ । शिव लाइ एक लोटा जल, एक बिल्व पत्र र अक्षत दिएर मात्र शिव जि लाइ प्रसन्न गर्न सकिन्छ परंतु यद‍ पूजा पश्चात शिव जि लाइ तीन चोटि श्रद्धा पूर्वक बम/बम को उच्चारणको साथ याद गरेमा शंकर जी लाइ अपार प्रसन्नता हुन्छ।। त्यसैले सोमवारको दिन र जब तपाइ शिव जी को पूजा गर्नुहुन्छ बम् बम् भोले भन्न नबिर्सनुहोस्।
Prevबिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि समर्पित छ । यो दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ ।
शिव लिंगलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको निधन शिवलिँगलाइ फुटाइएकै स्थानमा बनाइयो शिव मन्दिर दिनकै कैयौं भक्तजन मन्दिरमा जान्छन्
नेपालमा कोरोनाका कारण थप एक जनाको मृत्यु
कार्यकाल थपिएन भने अबको २० दिनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बिदा हुनेछन् ।